कर फर्छ्योट प्रकरणमा महतको टिप्पणी, ‘कालोले अरुलाई पनि कालो नै देख्छ - Samudrapari.com
कर फर्छ्योट प्रकरणमा महतको टिप्पणी, ‘कालोले अरुलाई पनि कालो नै देख्छ
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुलाई आफूले लुकाएको भनेर आरोप लगाउनु नै हाँस्यस्पद र मिथ्या भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता महतले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो ‘मैले लुकाएँ भनेर बाहिर हल्ला चलाइएको छ, यो जत्तिको हाँस्यस्पद अरु के हुन्छ ? आफ्नो भाषाअनुसार अरुलाई जज गर्नु हुँदैन ।’ महतले आफू त्यस्तो प्रकृतिको मान्छे नभएको समेत स्पष्टोक्ति दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मलाई लगाइएको आरोप गलत हो, आफू कालो हुनेले अरुलाई पनि कालो नै देख्छ, मलाई लगाइएको आरोपको म जहाँसुकै गएर भएपनि फेस गर्न तयार छु ।’